Vaovao - Ahoana ny fisafidianana ny mahandro mahandro
Tena mora ampiasaina ve ireo mpahandro lafo vidy ireo noho ny vokatra mahazatra misy yuan an-jatony? Vao tsy ela akory izay, mpanjifa maro no nitatitra tamin'ny gazetinay fa ny sasany amin'ireo antsoina hoe lakozia avo lenta sy be vidy lafo dia tena tsy mora ampiasaina, ary ny vokatry ny fampiasana dia tsy mitovy amin'ny fampielezan-kevitr'ilay mpanamboatra.
Tsy mitsaha-miakatra ny vidin'ny kojakoja mahandro lafo vidy, ary ny vokatra lafo sasany tsy mora ampiasaina. Ramatoa Wei, izay mipetraka ao amin'ny Distrikan'i Hexi ao an-tanàna, dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa nividy fanendasana vato voajanahary nafarana avy any Korea Atsimo izy niaraka tamin'ny tolo-kevitr'ireo mpivarotra. Tamin'izany fotoana izany dia nilaza izy fa ity karazana Pan ity dia tsy misy firakotra simika, saingy mbola manana ny mampiavaka azy ny tsy miraikitra. Na izany aza, rehefa manamarina tsara ny torolalana ianao dia ho fantatrao fa raha te hahatratra ny vokan'ny tsy fifikirana amin'ny vilany dia tsy maintsy manana hafanan'ny solika ampy ianao rehefa mahandro. Raha ny fepetra takin'ny orinasa dia tsy maintsy miandry ny hafanan'ny diloilo sy ny setroka alohan'ny hametrahana azy ireo ianao. Fa hoy Ramatoa Wei raha ny fahalalany azy raha mafana ny setroka ny menaka avy eo nendasina dia mety aza salama. Mpanjifa iray hafa, Ramatoa Liu, nandany efa ho 2000 yuan tamin'ny sambo vy tsy misy fangarony roa sosona. Na izany aza, hitany fa kely loatra ny sosona ambony amin'ilay sambo, ka tsy azo ampiasaina. Ny boiler sosona roa sosona dia tsy azo ampiasaina afa-tsy iray sosona. Ny mpanjifa sasany dia mitatitra ihany koa fa ny karazana spatula sy sotro lafo vidy sasany dia tsy mora ampiasaina noho ny lanjany mavesatra sy ny endriny tsy mitombina. Ny ankamaroan'izy ireo dia malaina afa-tsy spatula fanendasana sy sotro.
Raha ny marina dia mila ampiasaina isan'andro ny vilany sy ny lapoaly. Ny fampiharana dia ny zava-dehibe indrindra. Nitsidika ny tsena ity mpanao gazety ity ary nahalala fa tsy lafo ny vidin'ny kojakoja fandrahoana amin'ny marika malaza. Ohatra, ny lapoaly ampiasaina matetika, ny vidiny dia matetika manodidina ny 100 yuan, miaraka amin'ny tsy fametahana tapa-kazo amin'ny lapoaly, azo vidiana mihoatra ny 200 yuan, raha vy tsotra, fanendasana vy voadio, na dia latsaky ny 100 yuan aza . Ary andiana etona vy tsy misy fangarony roa sosona, ary maharitra 100 yuan ihany koa. Ramatoa Wu, olom-pirenena iray, dia nilaza tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy fa nisy sakaiza nanome azy andiana lapoaly nafarana avy any ivelany, izay toa tsara tarehy tokoa, saingy rehefa avy nampiasa azy imbetsaka dia hitany fa mifikitra sy tsy mety amin'ny fanadiovana foana izany. Mety kokoa ny nampiasa lovia fanendasana vy 100 yuan tany an-trano. Mpanjifa maro izay efa nanana traikefa toy izany no milaza fa ny tena zava-dehibe dia mora vidy sy mora ampiasaina ny fitaovana fandrahoana sakafo, ary tsy ilaina ny manenjika an-jambany ireo vokatra avo lenta.